Forex Trading ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | FXCC အားဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ Forex Trading ၏
ပင်မစာမျက်နှာ / သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေန
ဒီနည်းကိုဘ်ဆိုဒ်ရယူသင်သည်ဤ site နှင့်အိုင်တီဆိုပစ္စည်းများနှစ်ဦးစလုံးနှငျ့ပတျသကျသောအောက်တွင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ရသဘောတူသည်။ FXCC သင်ဖို့သတိပေးခြင်းမရှိပဲသည့်အချိန်တွင်မဆိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်. မှန်မှန်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာဝန်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲလိုက်ဒီနည်းကို SITE ကိုအဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှုဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေလက်ခံကြောင်းသင်ဖွဲ့စည်းကြမည်။ သင်တို့သည်ဤအစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသဘောမတူပါဘူးလျှင်ဤဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်မပါ။
FXCC ဒီ site ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဒီ site ကနေကူးယူမျှလုပ်ရပ်သင်သည်ဤ site မှမဆိုဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ပစ္စည်းမှခေါင်းစဉ်လွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။ သင်ဤ site ကိုမှထုတ်လွှင့်ကြောင်းဘာမှ FXCC များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာမဆိုအပျသညျဟုရည်ရွယ်ချက် FXCC အသုံးပြုသောနှင့် FXCC ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဖို့ရာမဆိုဥပဒေအရသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအခွင့်အာဏာမှအပါအဝင် FXCC အားဖြင့်သင့်လျော်သောယူဆအဖြစ်ထုတ်ဖော်ဖို့နောက်ထပ်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်နိုင်ပါသည်။ FXCC သိုက်ဒီ site မှာအားလုံးပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ဆိုင်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူအားလုံးအခွင့်အရေးနှင့်ပညတ်တရား၏အပြည့်အဝအတိုင်းအတာအထိထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အရေးကိုပြဋ္ဌာန်းရန်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးဒီဇိုင်း, စာသား, ဗီဒီယို, အသံအသံသွင်းနှင့်ရုပ်ပုံများကိုကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသောပစ္စည်း, မဟုတ်ရင်ဖော်ပြ FXCC အသုံးပြုပုံဖော်ပြထားအဖြစ် မှလွဲ. ပိုင်နေကြသည်။ အဖြစ်မဟုတ်ရင်ဖော်ပြဤနေရာတွင်ဖော်ပြထား မှလွဲ. သူတို့က, ကူးယူမှတဆင့်ကူးစက်သော, ပြသ, ဖျြော, (လျော်ကြေးသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်) ဖြန့်ဝေ, လိုင်စင်, ပြောင်းလဲ, ရှုမြင်သုံးသပ်ကြ, နောက်ဆက်တွဲအသုံးပြုရန်သိမ်းဆည်းထား, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်မပါဘဲတစုံတမျိုးအတွက်မြေတပြင်လုံး၌ဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်အသုံးပြုမရစေခြင်းငှါ FXCC ရဲ့ကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်။
site ၏ ACCESS
ဤ site ကတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များ, ကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းမှညွှန်ကြားထား, သို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးဘို့ရည်ရွယ်သို့မဟုတ်ခွငျးအားဖွငျ့ကိုသုံး၏နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးသူသည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်မည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိရာထိုကဲ့သို့ဖြန့်ဖြူးမှာတည်ရှိပါတယ်ကြသည်မဟုတ်, ထုတ်ဝေ, ရရှိမှုသို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်းအရာထိုကဲ့သို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းမည်သည့်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်လိုင်စင်လိုအပ်ချက်မှ FXCC သို့မဟုတ်ယင်း၏ affiliates လက်အောက်ခံမယ်လို့ဆန့်ကျင်ပါလိမ့်မယ်။
liabilities ၏အာမခံနှင့် Limited ၏ Disclaimer
ဒီ site ပေါ်တွင်အဆိုပါသတင်းအချက်အလက် "ထိုသို့အမျှ" ထောက်ပံ့ပေးသည်။ FXCC မဆိုအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, တစ်ခုခုကိုဖော်ပြသို့မဟုတ် impliedly, ဤနေရာတွင်ပေးပစ္စည်းများကိုများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုခိုင်လုံခြင်းနှင့်ဖော်ပြနေတဲ့အထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ကြံ့ခိုင်ရေးမဆိုအာမခံ disclaims မထားဘူး။ FXCC ဒီ site ကနေတစ်ဆင့်ကိုသင်ရရှိနိုင်လုပ်မဆိုသတင်းအချက်အလက်တတိယအုပ်စုတွေကကြားဖြတ်အနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မဆိုအရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပေမယ့်ဒီ site ပေါ်တွင်သင်ပေးသတင်းအချက်အလက်များရယူသို့မဟုတ်ပြုစုကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ဖို့ယုံကြည်အရင်းအမြစ်များမှ, FXCC မဟုတ်နိုင်နှင့်မဆိုအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်သည်သင်ရရှိနိုင်လုပ်မဆိုသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကို, တရားဝင်မှု, အချိန်မီသို့မဟုတ်ပြည့်စုံအာမခံမထားဘူးသည်။ ကိုမ FXCC, မယင်း၏ affiliates, ဒါရိုက်တာ, အရာရှိများသို့မဟုတ်န်ထမ်းမဆို, မဆိုတတိယပါတီရောင်းချသူခံထိုက်ပေလိမ့်သို့မဟုတ်သင်ဤ site ကိုမဆိုပျက်ကွက်သို့မဟုတ်ပြတ်တောက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ခံရသည်ဟုမဆိုအရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မဆိုကြင်နာမဆိုတာဝန်ယူမှုရှိလိမ့်မည်, သို့မဟုတ်ရှိမရှိ, ဒီ site ကိုသို့မဟုတ်သင်ဖို့, သို့မဟုတ်သင့်ဝင်ရောက်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, မှဝင်ရောက်ခွင့်, ဒါမှမဟုတ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဤပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အခြားအကြောင်းမရှိထံမှမြို့သားရရှိနိုင်ပါရှိသောဒေတာရာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အခြားပါတီများ၏လုပ်ရပ်သို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ရာမှရရှိလာတဲ့ သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းမရှိမှမြင့်တက်ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲအခွအေန FXCC သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောကျပံ့ပေးမဆိုရောင်းချသူ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းခဲ့ကြပေမည်။
အဘယ်သူမျှမအခြေအနေမျိုးမှာမသက်ဆိုင် FXCC ဖြစ်ပေါ်ထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုအသိပေးထားသည်ဖြစ်စေ, မည်သည့်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ဤ site ကိုသို့မဟုတ် သိ. ဆိုသောအဘို့ကိုသုံးစွဲဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းထဲကပေါ်ထွက်လာသောမဆို, လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖွစျပှား, အထူး, ပြစ်ဒဏ်ခတ်သို့မဟုတ်စံပြပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ဖြစ် FXCC ပါလိမ့်မယ် နှင့်မသက်ဆိုင်စာချုပ်, တရားမျှတမှုမရှိခြင်းအတွက်တင်းကျပ်သောတာဝန်ဝတ္တရား, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင် (ပေါ့ဆမှုအပါအဝင်) ရှိမရှိလုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံ၏။
ဒီ site တွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များသည်သာသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုသို့မဟုတ်တောင်းနိုင်အောင်ခွင့်ပြုချက်မရသည့်အတွက်သို့မဟုတ်ထိုသို့သောကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တောင်းနိုင်အောင်လုပ်ဥပဒေမဲ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုလူတစ်ဦးမှဘယ်သူကိုမှရ, မမှထောက်ခံချက်အဖြစ်မှတ်မဆိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှတစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းနိုင်အောင်အဖြစ်မှတ်မဖြစ်သင့် ဝယ်ရောင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုအထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ သငျသညျပြင်းပြင်းထန်ထန်မဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်လွတ်လပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, ဘဏ္ဍာရေး, ဥပဒေနှင့်အခွန်အကြံဉာဏ်ကိုရယူရန်အကြံပြုပါသည်။ ဒီ site ထဲမှာဘယ်အရာကမှအဆိုပါ FXCC ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, သို့မဟုတ်၎င်း၏ affiliates, ဒါရိုက်တာ, အရာရှိများသို့မဟုတ်န်ထမ်းမဆိုအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံဉာဏ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်အဖြစ်ဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်သငျ့သညျ။
မဆို Non-ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဘဏ္ဍာရေးတူရိယာထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရည်ရွယ်ချက်များကိုရေရှည်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောခု၏သာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဒီတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ကြောင်းအကြံပြုလိုတယ်။
ဒါဟာအားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဘဏ္ဍာရေးတူရိယာထဲမှာမဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမချခင်တဲ့ professional ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးထံမှအကြံဉာဏ်ကိုရှာခြင်းငှါသင့်ကြောင်းကိုလည်းအကြံပြုလိုတယ်။
အခြားအင်တာနက်စာမျက်နှာများ Links များ
မဟုတ်သော FXCC Website များဖို့ links တစ်ခုတည်းကိုသာအဆိုပါ FXCC Website များ၏အသုံးပြုသူများအသုံးဝင်သောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြောင်းအရာများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်မှထောက်ပြအဖြစ်ပေးအပ်နှင့် FXCC ထိုကဲ့သို့သောမဟုတ်သော FXCC Website များပေါ်တွင်အကြောင်းအရာကျော်မျှမထိန်းချုပ်ရှိပါတယ်နေကြသည်။ သငျသညျ FXCC ကထိန်းချုပ်ထားမဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လင့်ထားသည်ဖို့ရွေးချယ်ပါက, FXCC တိကျမှန်ကန်မှု, ပြည့်စုံ, ယုံကြည်စိတ်ချရ, ဒါမှမဟုတ်မဆိုအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်တို့ကိုသင့်လျော်အပါအဝင်ထိုကဲ့သို့သော site ၏ content ကိုရည်မှတ်အမြန်သို့မဟုတ်အဓိပ်ပာဖြစ်စေ, အဘယ်သူမျှအာမခံစေသည်, မ FXCC ရမ်းမ ထိုကဲ့သို့သော်ဆိုက်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာမူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, သို့မဟုတ်တတိယပါတီသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော်ဆိုက်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်အခြားညစ်ညမ်းမှုကြောင့်အခွင့်အရေးကိုအခြားချိုးဖောက်မှုမဆိုတောင်းဆိုမှုများမှအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ FXCC အင်တာနက်ပေါ်ရှိစာရွက်စာတမ်းများ၏စစ်မှန်မှုကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။ မဟုတ်သော FXCC က်ဘ်ဆိုက်များမှ links ဆို၏ထောက်ခံချက်ပါသို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်များ, အတွေးအခေါ်များ, ထုတ်ကုန်, သတင်းအချက်အလက်, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်များမှာကိုကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်များမှာအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုများအတွက်တာဝန်ဆိုလိုဘူး။
သငျသညျက e-mail ဖြင့် FXCC နှငျ့ဆကျသှယျလျှင်, သင်အင်တာနက်က e-mail, ၏လုံခြုံရေးမသေချာမရေရာကြောင်းသတိပြုပါသင့်ပါတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောမသေချာမရေရာနှင့်အင်တာနက်ကျော်လျှို့ဝှက်၏ဖြစ်နိုင်သောမရှိခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုလက်ခံ encrypt မလုပ်ထားသည့် e-mail, အထိခိုက်မခံသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကို 100% လုံခြုံမဟုတ်ပါဘူးနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြားဖြတ်နှင့်ဖတ်ရှုနိုင်ပေမည်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပေးမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်သာကုမ္ပဏီအတွင်း shared ၎င်း၏ affiliates နှင့်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဖြစ်ကုသပါလိမ့်မည်နှင့်မည်သည့်စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်တရားဝင်တရားစွဲဆိုမှုအောက်မှာ မှလွဲ. မည်သည့်တတိယပါတီမှထုတ်ဖော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ web site ကိုခြေရာခံစနစ်များကိုလည်းသင်တို့သည်ဤမျှပေါ်တွင်လည်ပတ်မှု၏ကြိမ်နှုန်းကဒီ site ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့, သင်ဝင်ရောက်ထားသောစာမကျြနှာအသေးစိတ်ဒေတာစုဆောင်းလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ရယူသတင်းအချက်အလက်များကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့ content တွေကိုတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်နှင့်မဆိုသင့်လျော်သောအားဖွငျ့, သင်ဆက်သွယ်ပါရန်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့မှအသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်ယုံကြည်မဆိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသငျသညျပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။